Thompson kunye neWambaugh, iiklasikhi ezimnyama kakhulu ekwindla eshushu kakhulu | Uncwadi lwangoku
UThompson kunye noWambaugh, iiklasikhi ezimnyama kakhulu zokuwa okushushu kakhulu
Oku kuwa akulunganga. Imbalela ibeka umhlaba wesiqingatha seSpain. Umntla-ntshona yidlelo lamadangatye abekwe ngabantu abangenantliziyo kwiindawo ezintle zaseGalician naseAsturian. Emantla mpuma, imimoya ngokubanzi nayo ibishushubeza ixesha elide. Kwaye akukho lifu kwisiphelo sokuhlaziya imeko-bume. Ewe, elona xesha lililo lokuba umfundi omnyama angummangaliso. Kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokujonga i ezakudala ezikhawulezayo ngakumbi.
UJim Thompson noJoseph Wambaugh ngamagama amabini eyonwatyelwe kakhulu kwaye ihlonitshwa yenoveli yolwaphulo-mthetho eMntla Melika ngokukodwa kodwa ngokubanzi. Impembelelo yolunye uhlobo olukhulu olufana nengelosiino UJames ellroy okanye i-viking Jo Nesbø kwiYurophu yakudala, nawuphi na umthandi ozihlonelayo woluhlobo kufuneka ukuba ayifundile enye yemisebenzi yakhe. Namhlanje ndijonga kwakhona abameli bakhe.
1 UJim Thompson
1.1 Imiphefumlo engama-1.280
1.2 Umbulali ngaphakathi kum
2 UJoseph Wambaugh
2.1 Amagosa amatsha
2.2 Isikhululo saseHollywood
Kukho iindlela ezingamashumi amathathu anesibini zokubalisa ibali kwaye ndizisebenzise zonke, kodwa inye kuphela icebo: izinto aziyiyo le nto zibonakala ngayo.
(IAnadarko, Oklahoma, 1906-Huntington Beach, California, 1977). Thompson Usweleke engakhange aqondwe ukuba ufumene ixesha elingaphezulu. Abanye bayifaka kwi-American Holy Trinity yohlobo olo ecaleni Chandler y UHammett imilo. Wayengumbhali womsebenzi omkhulu kunye Iinoveli ezingama-29 ipapashwe kwaye ingapapashwa nangakumbi. Kukho icandelo elikhulu kuyo ngobomi bomntu (Wayengunyana wesherifu eyonakeleyo owayefanele abalekele eMexico kwaye wagqibela ngokuzibulala).
Wabonisa izihogo awayehlala eUnited States kwisiqingatha sokuqala senkulungwane yama-XNUMX enxibe ezakhe utywala. Wayephila kancinci kuncwadi lwakhe, kodwa wenza kumanqaku akhe ephephandaba. Upapashe eyakhe Inoveli yokuqala eneminyaka engama-39 kwaye wabhala i-12 kunyaka onesiqingatha. Wayekwiindawo ezinqamlezileyo zeKhomishini ka-Senator uJoseph McCarthy apho wagwetywa khona ngo-1951.
Phakathi kobugcisa bakhe kufuneka-abe nezihloko ezinjengezi zimbini zingezantsi, kodwa nazo Ubusuku basendle o Ukubaleka, phakathi kwabanye. Utyikitye ezimbini izikripthi edume kakhulu UStanley Kubrick kweminye imisebenzi emibini yobugcisa be cinema, I-heist egqibeleleyo y Iindlela zozuko.
Nicky corey ngumphathiswa oqhelekileyo wedolophu encinci yaseMelika ebonakala dim kwaye ayicacanga ncam, kodwa eneneni kukrelekrele oko kuzenza isidenge. Obo bukrelekrele buyingozi yokwenene kwabo bajikelezileyo. Ukongeza, zonke izenzo zakhe zenzuzo yakhe ngaphandle kokukhathalela iziphumo zabanye. Isenzo sobulumko sikaThompson kukufumana umfana okhohlakeleyo kwaye ongenantliziyo njengoCorey ugqibile ukusithanda kwaye sifuna ukuba aphumelele kunyulo olutsha lomkomishinari ngokuchasene nembangi eyindoda ethembekileyo.
Umbulali ngaphakathi kum
Ibhalwe kwi 1952, ubalisa ngobomi obuzolileyo kwiCentral City, idolophu yeoyile eNtshona Texas. Pha USekela-Sheriff uLou Ford, othe wonke umntu wamthatha njengendoda enoxolo nenobuntu, ubuyela "kwisifo" esamenza yenza ulwaphulo-mthetho ebutsheni bakhe. Ukusukela ngoko uLou ebefuna zibonakala ziqhelekileyo phakathi kwezinye izinto, umzekelo, kubudlelwane bakhe no-Amy Stanton, intombazana evela kusapho olulungileyo, njengaye. Kodwa yonke into iya kukhokelela kwi-apocalypse enegazi.
Yaba yinto ukulungelelaniswa kwefilimu ngo-2010 lathiswe ngu UMichael Winterbottom kunye neenkwenkwezi UCasey Affleck, uKate Hudson noJessica Alba.
Iinoveli zikaWambaugh zibusindisile ubomi bam. UJames ellroy
Wambaugh sele engama-80 EyoMqungu kulo nyaka. Unyana wamapolisaWabhalisa kwiiMarines eneminyaka eyi-17. Emva kokuphumelela eChaffey College, wangena LAPD ngo-1960, apho wachitha iminyaka elishumi elinesine kwaye wafikelela Umphathi wamapolisa. Ungumbhali weenoveli ezininzi apho kuxubene ubuxoki kunye nenyani. Phakathi kwazo kukho Intsimi yamatswele o I knight eluhlaza okwesibhakabhaka.
Yincwadi yakhe yokuqala yaza yapapashwa ngo-1971. Isixelela Iminyaka emihlanu yokufunda uqeqesho olusuka kumagosa asebupoliseni amathathu aseLos Angeles kwiminyaka engamashumi amathandathu. Ngeli xesha baphanda ukuphanga kunye nokutshutshisa oonongogo, ukuphelisa iimfazwe zemigulukudu nokuphelisa ukuxabana kosapho. Kodwa bafumanisa ukuba bakude ngokungangqinelani kwinto nganye abaqonda ukuba intle kwaye ayilunganga.
Inesantya esimangazayo kwaye ngu umzobo othembekileyo wenkqubo yesiqhelo yamapolisa kunye neeyure zabo zomsebenzi omde okanye ukujikeleza ezitalatweni. Bayilungisa kwi-cinema ngo-1972 kwaye bafaka inkwenkwezi kuwo UGeorge C. UScott noStacey Keach.
Ngeli xesha abalinganiswa abaphambili amagosa avela kummandla waseHollywood. Bahamba ngesiqhelo esiqhelekileyo phantsi kweliso elibukhali le-sajini yamapolisa ebizwa ngokuba yi-Oracle. Kodwa loo nto iya kutshintsha xa uthotho lweziganeko ezibonakala zingadibaniyo zibazisa elona tyala limangalisayo kwenzeke kwiminyaka yakutshanje. Isisombululo sakho siya kukukhumbuza ukuba eLos Angeles akukho mda woyikisayo kunye nokuzibaxa izinto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UThompson kunye noWambaugh, iiklasikhi ezimnyama kakhulu zokuwa okushushu kakhulu
Ababini bamagorha am …… .. ingxelo entle
Enkosi. Sabelana ngamagorha.
UFernando Aramburu uphumelele imbasa yeSizwe yokuBalisa ngo-2017 ngo "Patria"
Ezona ncwadi zibalaseleyo nguJavier Sierra